SBC – Somali Broadcasting Coporation(SBC) » QM & DKMG oo dalka Talyaaniga ku saxiixday Heshiis ah in aan la Askareyn Caruurta
Shirkii Madaxda IGAD oo lagu heshiiyey in DFS qabato shir lagu dhisayo maamulada Jubooyinka 15sano ka dib Soomaaliya oo Heer ka gaartay Koobka Kolayga Magaloyinka Africa+Sawiro Dhageyso Barnaamijka Todobaadka iyo Soomaaliya Jimce Kasta ka baxa Idaacada SBC 89.9 Dhagayso Cabasho ka timid dadka kudhaqan xerooyinka qaxootiga dhadhaab Wasiirada arimaha Dibada Igad oo Warmurtiyeed taageeraya DFS ka soo saaray Kulan ay yeesheen BBC SOMALI
QM & DKMG oo dalka Talyaaniga ku saxiixday Heshiis ah in aan la Askareyn Caruurta
July 3, 2012 - Written by Webmaster - Edited byWebmaster Xarunta Wasaaradda arrimaha dibedda dalka Talyaaniga waxaa maanta heshiis ku gaaray dowladda federaalka KMG Soomaaliya & Qaramada Midoobay, waxaana heshiikaasi uu ku saabsanaa in mamnuuc laga dhigo askareynta caruurta yaryar, iyadoo dhinaca dowladda heshiiskaasi uu u saxiixay wasiirka gaashaandhiga Xuseen Carab Ciise, waxaana munaasabada heshiiskaasi lagu saxiixayey goob joog ka ahaa Guddoomiyaha Baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan, Raiisul Wasaaraha Dowlada FKMG C/weli Maxamed Cali, Wasiiro, Xildhibaano, iyo Xubno ka socday Maamulada Ahlu Sunna, Galmudug iyo Puntland.
Laga billaabo maanta dowladd Soomaaliya waxey ka mid noqoneysaa dalalka qaatay in ay ku dhaqmaan in la diido askareynta caruurta – ayuu yiri wasiirka gaashaandhiga xukuumadda federaalka, wuxuuna intaa ku daray in caruurta Soomaalida ay caruur ahaantooda u noolaan doonaan.
Caruurta Soomaaliyeed kama mid noqon doonaan askarta, waxeyna noqon doonaan kuwa mar walba laga difaaco qataraha ku imaan kara, xeyndaabkooduna wuxuu noqon doono mid ku teedsan caruurnimadooda ayuu yiri wasiirka gaashaandhiga.
Heshiiskaan waxaa u saxiixay dhinaca UN ka wakiilka xoghayaha guud u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Mahiga, wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay in Soomaaliya ay xubin buuxda ka noqoto dalalka ay mamnuuc ka tahay askareynta caruurta.
Suleeqo Maxaamuud Qabowsade
Daalacatey :391 Leave a Reply Cancel reply
Shirkii Madaxda IGAD oo lagu heshiiyey in DFS qabato shir lagu dhisayo maamulada JubooyinkaMay 25, 2013
15sano ka dib Soomaaliya oo Heer ka gaartay Koobka Kolayga Magaloyinka Africa+SawiroMay 25, 2013